FBC - Labsiin yeroo hataattamaa fageessee yaaduu mootummaa muul’isa jedhame
Labsiin yeroo hataattamaa fageessee yaaduu mootummaa muul’isa jedhame
Finfinnee, Amajjii 4,2009(FBC) –Rakkoo diinagdeerra qaqqabuu danda’u labsiin yeroo hataattamaa hambiseera jedhan muummichi ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalany gaaffilee miseensota Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa dhiyaataniif yammuu deebisan.
Muummichi ministiraa walga’ii idilee 12ffaa mana marichaatti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laataniiru.
Labsii yeroo hataattamaatin dura haalli ture walitti dhufeenya hawaasummaa biyyattiis kan diiguu fi biyyattii kan bittinsu ture jedhan muummeen ministiraa obbo Haaylamaariyaam.
Diigumsa kanammoo mootummaan Shaabiyaa fi jala deemtonni isaa yeroon isaa amma jechuun waan danda’an hundaan carraaqaa turaniiru jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Ummanni labsicha waan deeggareef amma biyyattiin tasgabbooftettis jedhan.
Caasaan nageenyaa naannoo fi federaalaa rakkoo uumamerraa barnootaa fi muuxannoo argataniiru. Rakkoon uumame osoo uumamuu baatee gaarii ture; haata’uutii garuu heera cinaa kan dhaabbatanii fi diigumsaaf kan fiigan ittiin adda baafanneerra jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Dhiibbaan mirga namoomaa ammii ta'e akka uumame kan himan obbo Haaylamaariyaam, isaan rakkoo akkanaa keessatti hirmaatanis seeratti dhiyaatanii itti gaafatamaa jiru jedhaniiru.
Hedduun isaaniis heera biyyattiif waardiyyaa dhaabbachuun, aarsaa kanfalaniiru. Labsii yeroo ariifachiisaarratti diippiloomaatotaa fi ambaasaaddaroota alaatif ibsi laatameera.
Ololli biyyattiin ammas hin tasgabboofnen haasa’amu, turus dhaabbachuun isaa hin hafu. Wanni guddaan garuu mootummaa cimaan ijaarramuusaa addunyaatti muul’isneerra jedhan muummichi ministiraa.
Haaromsa gadi fageenyaa galmaan ga’uufis taanan labsiin yeroo ariifachiisaa deeggarsa taasiseera.
Oduuwwan Biroo « Nageenya baha Afrikaaf Ityoophiyaan hojjechaa jirti- obbo Haaylamaariyaam	Ityoophiyaa fi Jibuutii jidduutti waliigalteen shariikummaa mallatteeffame »